Natiijada Xildhibaannada 5-ta ah ee Maanta Lagu Doortay Kismaayo | Arrimaha Bulshada
Home News Natiijada Xildhibaannada 5-ta ah ee Maanta Lagu Doortay Kismaayo
Natiijada Xildhibaannada 5-ta ah ee Maanta Lagu Doortay Kismaayo
Bulsha:- Magaalada Kismaayo xarunta KMG ah ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaa maanta lagu doortay 5 kursi oo ka tirsan golaha shacabka Baarlamaanka ee Jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo horay loo shaaciyey.
1:Kursiga tirsigiisu yahay HOP#072 ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, kaas oo 75 cod kaga guulaystay musharrax Cabdisamad Maxamed Cabdullaahi, kaas oo helay 18 cod, halka ay halaabeen 2 cod codadkii Guud.
2: Kursiga tirsigiisu yahay HOP#130 ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Mowliid, kadib markii doorashada kursiga ay ka tanaasushay musharrax Haboon Xasan Tifow, waxaana cod gacantaag 100 ah ku guulaystay Xildhibaan Mowliid Cabdi.
3: Kursiga tirsigiisu yahay HOP#079 ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Maxamuud Maxamed Cuma, kadib 72 cod uu helay, halka musharrax Farxiya Xasan Axmed oo heshay 21 cod, waxaana ay horay ugu fadhisay kursiga, waxaa halaabay 2 codad.
4: kursiga tirsigiisu yahay HOP#112 ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Waceys, kaas oo 97 cod oo oo gacantaag ah, ku guulaystay waxaa tanaasulay musharrax Daauud Cismaan Cali, 3 qof ayaa diiday, halka 1uu aamussay .
5: Kursiga tirsigiisu yahay HOP#136 ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Cumar Yuusf Qaladiid, kaas 82 cod kaga guulaystay, musharrax Cabdifitaax Cumar Macalim oo helay 17 cod, sida uu shaaciyey guddiga majirin cod halaabay oo kamid Ergada.
Kuraastaan maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ay qayb kayihiin golaha shabaka Baarlamanka11-aad ee Jamhuriayadda federalka ah ee Soomaliya, kuwaas oo la gudogalay maalmihii ugu damabaysay dooshadooda waxaa 3 cisho oo quray ay ka hartay malaintii loo asteen gabagaba ee 25-ka bisha.